Raharaham-pirenena Archives - Page 213 sur 296 -
13/07/2017 admintriatra 0
Olona valo hatreto no voasambotry ny zandary teto Antsirabe vokatry ny velam-pandrika natao tamin’ireo mpanao aferana-basy. Tratra niaraka tamin’izy ireo ihany koa ny basy poleta vita gasy miisa 7 miaraka amina bala 9mm miisa 20. …Tohiny
12/07/2017 admintriatra 0
“Mendrika andraisana fepetra hentitra sy haingana ny fihetsika izay naton’dRavalomanana ireny” io no valin-teny izay nomen’ny filohan’ny fikambanan’ny niaram-boina noho ny raharaha 7 febroary Rafaralahy Bona Jean pierre vantany vao nanotaniana mikasika ny hetsika izay …Tohiny
Notanterahina tany Morondava, renivohitry ny Faritra Menabe, ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenen’ny mponina 2017 na ny JMP. Tonga nanotrona ny lanonam-pankalazana tany an-toerana ny minisitry ny Mponina, Onitiana Realy, sy ny minisitry ny Tanora sy …Tohiny
Fanakarontanana : Handray andraikitra ny governemanta
11/07/2017 admintriatra 0
Na dia tsy nivantana aza androany ny praiministra Mahafaly Olivier Solonandrasana manoloana ny hetsika izay nitranga ny sabotsy teo. Dia hentitra ny fanambarana notanterahin’ny praiministra «tokony hiara- hientana sy hieritreritra ny rehetra tsy ho voakarontana …Tohiny
« 1 … 211 212 213 214 215 … 296 »
Raha tsy voafehy dia efa raikitra ny korontana. Izay no zava-nitranga tetsy Ankorondrano nanoloana sy manodidina ilay toerana misy ny tany antsoina hoe « Soa », ilay misy ny orinasa Romanor taloha. Raha efa nidina ...Tohiny